Nzira yekutonga sei Amazon sales ranking list?
Amazon ndiyo yakawanda e-commerce portal munyika. Zuva roga roga mamiriyoni evanhu anotenga zvigadzirwa papuratifomu, achisimudza mari yevatengesi uye Amazon yakawanda purofiti. Kusimudza nzvimbo yako yekutsvaga maAmazon mumutsva wekutsvaga mutsva kunogona kuwedzera zvikuru maratidziro enyu uye kuwedzera mari. Zvichida nzira yakanakisisa yekuvandudza kutengesa kwekutengeserana ndeyekutengesa zvakanakisisa-mu-class products kwekwanisiko. Uyezve, zvigadzirwa zvako zvinofanira kugara zviri muchikwata - umzug mã¶bel einlagern kosten. Zvimwe zvinhu zvakagadziriswa zvakadai semuongorori wekutsvaga tsvaga yekutsvaga, kutengesa nokukurumidza, uye kutakura kunongobatsira iwe chete. Izvi zvakakosha zvichashanda senzira dzakachengeteka dzeAmerica yako kuvapo kwakasimba.
Zvisinei, kunze kwenzira yekutanga yekutengesa, pane mamwe mazano maunofanira kuziva. Muchikamu chino, tichakurukura nzira dzaunofanira kuedza kuita kuti urongwa hwako huwedzere kuwedzerwa.
Nzira dzinobatsira dzekutonga Amazon sales ranking list
iwe unoda kuwedzera kutengesa kwako kuAmazon, kuenzaniswa kwakakwana kuchave kushandisa mamwe maitiro emotokari sezvinoitwa nemagariro evanhu. Kune dzakawanda dzemasangano emudzimai maAngles vanoshambadzira vanoongorora maitiro uye kupa vamwe mazano kunei uye pavanokwanisa kuita chibvumirano chakanaka. Nhengo dzemunharaunda dzakadaro dzakanyatsonaka pakuwana zvinhu zvakanakisisa zvekutengesa mutengo. Vakomana ava vachawana zvikanganiso zvekutengesa, chero kukurudzirwa, nemikana. Usarasikirwa nemukana wako wekutengesa zvimwe uye uve nhengo yeimwe yevanhu vanozivikanwa zvikuru mumagariro. Iva nechokwadi chokuti zvikwereti zvako zvakakosha zvakakwana kuti vatengesi vekutengesa vazvione. Kana zvinhu zvako zviri zvepamusoro uye zvine mutengo wakanaka, uchakwanisa kucherechedza zvakanyanya uye nokukurumidza kutengesa kutengesa.
Sezvaungave wakacherechedza, zvigadzirwa zvekutengesa zvakanakisisa zvinogara pa TOP TOP Search results page. Inogona kutsanangurwa neAmerica chinangwa chikuru kuti kuwedzere mari. Saka, zviri nani zvibereko zvako zvinotengesa, iyo yakakwirira iwe inowanikwa mumigumisiro yekutsvaga, iyo inotungamirira kune kutengesa kumwe. Maererano neAmerica shanduro yegorgorithm inotonga, nzvimbo imwe neimwe yezvigadzirwa mumigumisiro yekutsvaga inongororwa panguva imwechete. Saka, kunyange kana chinhu chako chiri panzvimbo yakakwirira mukati mechikamu chako, hazvirevi kuti ichaiswa pa TOP of Amazon kutsvaga mazwi akafanana.
Kushandura mamiriro ezvinhu ezvo nekuita kuti hutungamirire hutengi hweAmerica muhutsva hwekutsvaga mutsva, unoda kushandisa nzira dzinobatsira dzekutengesa chikwata chekutengesa. Ngatikurukurei dzimwe dzadzo.
Chinhu chakakosha pamushandirapamwe wenyu wekunyanya kugadzirwa kweAmazon ndiko kutsvakurudza kwemashoko makuru. Iwe unoda kuwana zvakakosha uye yakakwirira-mirefu yemisi mikuru yemashoko ayo vatengi vanoshandisa kuti vawane chaiyo chigadzirwa chako. Iwe unogona kuwana dhidhi iyi kushandisa Amazon Sales Central program kana Amazon Retail Analytics. Uyezve, zvinobvira kushandisa Google Trends yekutsvaga tsvaga ye data seproxy isina simba kana zvichidikanwa. Kana waita runyora rwemashoko ekutsvaga, iwe unofanirwa kutsvakurudza kuAmazon nokuda kwemashoko ako ehurukuro. Tsvaga chigadzirwa chako pane peji yezvitsvaga, tsvaga peji yezvinyorwa uye uzvitenge. Ita izvi kakawanda kusvikira iwe usingazooni kugadziridza kwekutanga. Mhedzisiro yegadziriro iyi ichabva pane zvinhu zvakawanda zvakadai semutengo wezvigadzirwa zvemiti, chibvumirano chakataurirana neAmazon. etc.
. Inogona kushanda senzira yakakosha yekusimudzira zvikonzero zvakasiyana-siyana. Vendor Power Coupons inozivikanwa pakati pevatengi. Ndicho chikonzero ivo vanogona kuchinja mararamiro enyu nekutengeserana. Iwe unogona kutarisana navo muBhodhi yeGolide kana kuti nzvimbo yekutengesa. Pane zvikamu zvishomanana zvemakoni kuitira kuti iwe unogona kuvandudza mararamiro ako kutsvaga kunyange ne zero sales velocity.
Zviri nyore kushandisa uye kuzvitarisa sezvaunogona kugadzira zvigoni zvemagetsi zvevatengesi iwe pachako mumutengesi. Uyezve, unogona kudzora zvakakwana bhajeti yako. Maphikoni acho anobviswa nokukurumidza apo bhajeti inopera. Imwezve rubatsiro ndeyekuti simba revatengesi mabhizimoni haritsvaki mari yakawanda. Iwe unogona kubhadhara zvikwereti uye ubhadhara mari yekuregererwa.
Kuti uwedzere kutengesa kwako uye uvandudze nzvimbo yekutsvaga kwemitengo ku Amazon search results list, unogona kungoita yako network. Izvo zvakawanda zvaunenge uchiita, iyo yakakwirira iwe uchatonga muAmazon search. Saka, iwe unogona kusimudzira kutengesa uwandu kuburikidza nekuwana yakawanda yekutengesa. Chokutanga pane zvose, unogona kushamwaridzana neshamwari dzako nehama kuti utenge zvinhu zvako. Iwe unogonawo kushandisa imwe mari iwe pachako pazvinhu uye kungovapa chipo kune vanhu. Nokuita kudaro, iwe uchatora bhora richizununguka.
Zvemagariro evanhu uye mabhulogi
. Ndicho chikonzero kuumba maakaunti ako pamapurogiramu anozivikanwa evanhu, zvakadai sa Facebook, Instagram, Twitter, uye Pinterest. Mapeji aya anofanira kunge ane zvigadzirwa zvako uye anoshandisa vashandi mukuzvitenga. Iva nechokwadi chekuti iwe uise chibvumirano ku Amazon yako tsanangudzo papeji yepamusoro. Iwe unoda kugara uchidzokorora ruzivo pamusoro peakaunti yako yevhidhiyo kuchengetedza basa revateveri.
Zvinonzwisisika kugadzira nguva dzose blog yakatsaurirwa kune zvigadzirwa zvako. Zvigadzirire iwe nyanzvi inozivikanwa nekugadzira kufadza uye kutsvakurudza-zvakagadzirwa zvikamu. Uyezve, iwe unogona kusiya zvaunotaura pane mamwe mabhuku akafanana kana mahurukuro ekukurukura. Nzira yakakosha yekuvandudza mararamiro ako ndeyekutumira mushanyi. Kuti uchengetedze nguva yako pahupenyu hwekunyora mabhuku uye kukurudzira, unogona kushanda pamwe chete nevatungamiri mukati memichero yako.
Imwe nzira yakawanda yekusika yekuwedzera marimi ekuonekwa kwako pawebhu ndeyokutsvaga ma Amazon mazvinhu. Iwe unogona kubudisa mabhidhiyo kana zvinyorwa uye uzvitumire kumasangano emashoko mukati memisika yako yemisika. Kana iwe uine dzimwe nhaurirano nemitambo yemavhidhiyo yakawanda seTV, mapepanhau, nezvimwe. , unogona kuvakumbira kuti vaise zvigadzirwa zvenyu. Kana zvisina kudaro, unogona kubhadhara zvipikicha zvako zvekutsvaga mumavhidhiyo epaInternet nehutano ku Amazon yako peji.